Dhaahaa (Nabiyow) micna kalana
Ayah 20:2 الأية
maanaan dejin korkaaga Quraanka inaad ku Dhibbooto.
Ayah 20:3 الأية
waase waanada Ciddii cabsan.
Ayah 20:4 الأية
waana soo dejinta Eebaha Abuuray Dhulka iyo Samooyinka sare.
Ayah 20:5 الأية
Eebaha Raxmaana Carshiguu ku Istawooday (si u cunanta).
Ayah 20:6 الأية
waxaana u sugnaaday waxa Samooyinka iyo Dhulka ku sugan iyo waxa u dhaxeeya iyo waxa ka hooseeya Dhulka.
Ayah 20:7 الأية
haddaad kor u Qaaddo Hadalka Eebe waa ogyahay waxa qarsoon iyo waxa la qariyey.
Ayah 20:8 الأية
Eebe Ilaah kale ma jiro isaga mooye, waxaana u sugnaaday Magacyo Fiican.
Ayah 20:9 الأية
ma ku soo Gaadhay warkii (Nabi) Muuse.
Ayah 20:10 الأية
markuu arkay Dab oo u yidhi Ehelkiisa Nagaada (suga) Anigu waxaan Arkaa Dabe, waxaana u dhawahay inaan idiinka keeno Dhuxul ama aan ka helo Dabka korkiisa Cid wax tusisa.
Ayah 20:11 الأية
markuu yimid (Muuse) Dabkii waxa loogu Dhawaaqay Muusow.
Ayah 20:12 الأية
anigu waxan ahay Eebahaa ee Siib Kabahaaga Adigu waxaad ku sugantahay Toggii Daahirnaa ee Dhuwa.
Ayah 20:13 الأية
anaana ku doortay ee maqal waxa laguu waxyoon.
Ayah 20:14 الأية
Anigu waxaan ahay Alle Ilaah (kalana) ma jiro Ani mooyee ina Caabuda, Oogna Salaadda Xuskayga.
Ayah 20:15 الأية
Saacadda (Qiyaame) way imaan waxaana u Dhawayahy inaan Qariyo in laga Abaal mariyo Naf kasta waxay Camal Fashay.
Ayah 20:16 الأية
ee Yuusan kaa lilin Xaggeeda Ruuxaan Rumeyn Saacadda, raacayna Hawadiisa (Xun) ood Halaagsanto.
Ayah 20:17 الأية
waa maxay Taas midigtaada ku Jirta Muusow (ogaal waydiin).
Ayah 20:18 الأية
wuxuu yidhi iyada waa Ushaydii waa Cuskadaa Korkeeda waxna waan ugu Lulaa Adhigayga Dana kalana waa iigu sugnaadeen.
Ayah 20:19 الأية
wuxuu yidhi (Eebe) Tuur Usha Muusow.
Ayah 20:20 الأية
wuuna Tuuray waayna soo baxday Mas Ordi.
Ayah 20:21 الأية
wuxuuna yidhi (Eebe) Qaad hana Cabsanin waxaannu ku celin Xaalkeedii Horce.
Ayah 20:22 الأية
U Dum Gacantaada Garabkaaga waxay soo Bixi iyadoo Cad Xumaan la'aan, waana Calaamad kale.
Ayah 20:23 الأية
Inaan ku tusinno Aayaadkanaga wey.
Ayah 20:24 الأية
ee Aad xagga Fircoon wuu Xadgudbaye (Kibray).
Ayah 20:25 الأية
wuxuu yidhi (Muuse Eebow ii waasici Laabta.
Ayah 20:26 الأية
iina Sahal (fududee) Amarkayga.
Ayah 20:27 الأية
Furna Guntinta Carrabkayga.
Ayah 20:28 الأية
ha Kaseen Hadalkeygee.
Ayah 20:29 الأية
Iina yeel Wasiir Ehelkeyga ah.
Ayah 20:30 الأية
Ayah 20:31 الأية
Kuna adkee «Xooji» Tabartayda (Dhabarkayga).
Ayah 20:32 الأية
Lana wadaaji Amarkayga.
Ayah 20:33 الأية
Inaan kugu Tasbiixsanno wax badan.
Ayah 20:34 الأية
oon ku Xusno wax badan.
Ayah 20:35 الأية
Adugu waxaad tahay mid na Arkee.
Ayah 20:36 الأية
Wuxuu yidhi (Eebe) waa lagu siiyey Warsigaagii Muusow.
Ayah 20:37 الأية
Waana kugu Mannaysannay Wanaag (ku siinay) korkaaga markale.
Ayah 20:38 الأية
markaan u waxyoonay Hooyadaa (ku ilhaamay) wixii lagu ilhaameeye.
Ayah 20:39 الأية
ku Tuur Muuse Taabud, kuna tuur Taabuudka Hirka Badda, Hirkuna ha ku rido Xeebta, waxaa qaadan Colkayga iyo Colkiisa (Fircoon), waxaana kugu tuuray Jeceylkeyga korkaaga iyo in lagu barbaariyo Ilaalintayda.
Ayah 20:40 الأية
(waxaan kugu Mannaysanay) markay Socotay Walaashaa oy lahayd maydin tusiyaa Ruux idiin Dhaqaalayn waxaana Kugu eelinay Hooyadaa si ay u qabowdo isheedu, oyna Murugoon, waxaadna Dishay Naf waana kaa korinay walbahaar, waana ku Imtixaanay Imtixaan, waxaadna ku nagaatay Sanooyin Ehelkii Madyan, markaasaad ku timid Qaddar (Eebe) Muusow.
Ayah 20:41 الأية
waxaana kuu doortay Naftayda.
Ayah 20:42 الأية
ee La taga Adiga iyo Walaalkaa Aayaadkayga hana ka daalina Xuskayga.
Ayah 20:43 الأية
Aad Xagga Fircoon wuu Xadgudbaye.
Ayah 20:44 الأية
una dhaha Hadal Jilicsan bal inuu waxa xusuusto ama Cabsado.
Ayah 20:45 الأية
waxay dheheen Eebow waxaannu ka Cabsan inuu nagu degdego ama nagu xadgudbo.
Ayah 20:46 الأية
wuxuu yidhi (Eebe) ha Cabsanina anaa idinla jira waana Maqli oon Arkaa.
Ayah 20:47 الأية
ee u Taga (Fircoon) una dhaha annagu waxaan nahay Rasuulladii Eebahaa ee Dir (u daa) Banii Israa'iil hanala jireene, hana Cadaabin (Ciqaabin) waxaan kuula nimid Aayad xagga Eebahaa, nabadgalyana ha ahaato Tuuxii raaca Hanuunka.
Ayah 20:48 الأية
Annaga waxaa Naloo Waxyooday in Cadaab u Sugnaaday Ruuxii Beeniya (Xaqa) oo Jeedsada.
Ayah 20:49 الأية
Wuxuu Yidhi (Fircoon) waayo Eebihiin Muusow.
Ayah 20:50 الأية
Wuxuu yidhi (Muuse) Eebahanno waa kan Siiya wax kasta Abuurkiisa oo Toosiyey.
Ayah 20:51 الأية
Wuxuu yidhi (Fircoon) Sidee Yahay Xaalkii Quruumihii hore.
Ayah 20:52 الأية
Wuxuu Yidhi (Muuse) Cilmigoodu waa Eebe Agtiis Kitaab aan ka dhumeyn Eebe uuna Halmaameyn.
Ayah 20:53 الأية
Waa Eebaha ka yeelay Dhulka Gogol, oo idinka bixiyey Dhexdeeda Waddooyin oo idiinka soo Dejiyey Samada Biyo oon ku soo Bixinay Noocyo Doog ah oo kala Tagsan.
Ayah 20:54 الأية
ee Cuna oo Daajiya Xoolihiinna, Arrintaasna Calaamooyin yaa ugu Sugan kuwa Caqliga leh.
Ayah 20:55 الأية
Xaggeedaan (Dhulka) idinka Abuuray, Dhexdeedana idinku Celin, Xaggeedaana Laydinka soo Bixin Mar Kale.
Ayah 20:56 الأية
Waxaan Dhab ahaan u Tusinay (Fircoon) Aayaadkanaga Dhamaan, wuuna Beeniyey oo Diiday.
Ayah 20:57 الأية
Wuxuu yidhi (Fircoon) Ma waxaad noola timid Inaad nagaga Bixiso Dhulkanaga Sixirkaaga Muusow.
Ayah 20:58 الأية
Waxaannu kuula imaanaynaa Sixir la mid ah ee mooyeel Dhexdeenna Balaan aynaan Baajinayn anaga iyo Adigu, Meel eg (La yaqaan).
Ayah 20:59 الأية
Wuxuu yidhi (Nabi Muuse) Ballankeennu waa Maalinta Quruxda (Kulankooda) waana in la soo kulmiyo Dadka Barqin.
Ayah 20:60 الأية
Wuuna jeedsaday Fircoon wuxuuna kulmiyey Dhagartiisii wuuna yimid.
Ayah 20:61 الأية
Wuxuu ku yidhi Muuse Magaciin be ha ku Abuuranina Eebaha korkiisa Been oos idinku Halaago Cadaab, waxaana Khasaaray Ruuxii Been Abuurta.
Ayah 20:62 الأية
Waxayna ku Doodeen amarkooda dhexdooda wayna faqeen.
Ayah 20:63 الأية
Waxayna dheheen Labadani waa Saaxirro waxayna dooni inay Idinkaga Bixiyaan Dhulkiinna Sixirkooda oy la tagaan Dariiqadiinna (Sharaftiinna) Fiican.
Ayah 20:64 الأية
ee Kulmiya Dhagar (tiinna) Imaadana idinkoo Saf ah waxaa Liibaanay Maanta Ciddii Sarreysee.
Ayah 20:65 الأية
waxay dheheen Muusow ama Tuur Usha ama aan anagu ahaanno kuwa hor tuura.
Ayah 20:66 الأية
wuxuu yidhi (Muuse) bal Tuura waxaana soo baxay xadhkahoodii iyo Ulahoodii oo loogu ekeysiiyey sixirkoodii inay ordi.
Ayah 20:67 الأية
wuxuuna ka kasay naftiisa Cabsi Muuse.
Ayah 20:68 الأية
waxaana nidhi ha Cabsan adigu adaa Sarreyne.
Ayah 20:69 الأية
Tuur waxa midigtaada ku jira ha gurato waxay sameeyeene, waxay uun sameeyeen Dhagar sixir, mana Liibaano Sixirrow meejuu yimaaddo.
Ayah 20:70 الأية
waxaa la riday Saaxiriintii iyagoo Sujuudi, waxayna dheheen waxaan rumeynay Eebaha Haaruun iyo Muuse.
Ayah 20:71 الأية
wuxuuna yidhi (Fircoon) miyaad u rumeyseen ka hor idankayga isagu waa kan idinku wayn ee idin baray Sixirka waxaaan goyn Gacmihiinna iyo Lugihiinna si isdhaaf ah waxaana idinku (daldali) wadhi Jirrid Timir, waxaadna ogaanaysaan midkanaga daran cadaab hadhidna badan.
Ayah 20:72 الأية
waxay dhaheen ka dooran meyno waxa noo yimid oo xujo ah iyo Eebaha na abuuray, ee xukmi waxaad xukumi, waxaad uun xukumi nolosha adduunyo.
Ayah 20:73 الأية
annagu waxaan rumeeynay Eebahanno inuu noo dhaafo gafafkanaga iyo waxaad nagu qasabtay (fircoon) oo Sixira Eebaa Khayrroon oo hadhi.
Ayah 20:74 الأية
ruuxii u yimaadda Eebihiis (aakharo) isagoo dambiile ah waxaa u sugnaaday jahannamo kumana dhinto dhexdeeda kumana noolaado.
Ayah 20:75 الأية
ruuxiise u yimaadda isagoo Mu'min ah oo falay camal fiican kuwaas waxaa u sugnaaday Jannooyinka sare.
Ayah 20:76 الأية
Jannooyinka nagaadiga (yey gali) ooy socoto dhexdeeda Wabiyaal iyagoo kuwaari dhexdeeda, taasina waa abaalmarinta Ciddii nadiif noqota.
Ayah 20:77 الأية
waxaan dhab ugu waxyoonay (Nabi) Muuse guuri Addoomahayga uguna yeel waddo Badda oo ingagan hana ka cabsan haleel, hana cabsan (Badda).
Ayah 20:78 الأية
waxaana raacay Fircoon (oo wata) Colkiisii waxaana ka daboolay hirka Xaggiisa wax daboolay.
Ayah 20:79 الأية
wuxuuna dhumiyey Fircoon Qoomkiisii mana hanuunin.
Ayah 20:80 الأية
Banii Israa'iilow waxaan idinka korinay Cadawgiinna, waxaana idinkula yaboohtanay (ballari) dhinieii buurta ee midig, waxaana ku soo dejinay kor kiinna Macaan iyo Shimbir.
Ayah 20:81 الأية
ka cuna wanaaggaan idinku Arsuqay hana ku xadgudbina dhexdiisa, oo idinku dhaco cadhadaydu, ruuxay ku dhaedo cadhadaydu dhabbuu u Hoobtay (halaagmay).
Ayah 20:82 الأية
anigu waan u dhaafid badanahay ruuxii Toobad keena oo rumeeya oo fala wanaaga oo hanuuna.
Ayah 20:83 الأية
maxaa kaa soo dedejiyey Qoomkaagii Muusow.
Ayah 20:84 الأية
wuxuu yidhi (Muuse) iyagu waa kuwan raadkaygay ku soo joogaan, waana kuu soo dag degay Eebow inaad iga raalli noqoto.
Ayah 20:85 الأية
wuxuu yidhi (Eebe) Annagu waxaan imtixaannay qoomkaagii gadaashaa waxaana dhumiyey Saamiri.
Ayah 20:86 الأية
markaasuu u noqday (Nabi Muuse) qoomkiisii isagoo cadhaysan oo walbahaarsan wuxuuna yidhi qoomkayow miyuuna idiin yaboohiin Eebihiin yabooh wanaagsan, ma waxaa idinku dheeraaday korkiinna ballankii mise waxaad doonteen inay idinku dhaedo Cadhada Eebe ood u baajiseen ballankaygii.
Ayah 20:87 الأية
waxay dheheen maanaan u baajin ballankaaga awooddanada waxaase nala saaray culaysyo Alaab oo ah waxa qoomku isku qurxinjireen waana tuurray siduu u tuuray Saamiri.
Ayah 20:88 الأية
wuxuuna u soo bixiyey dibi muuqal ah oo ood leh, waxayna dhaheen kani waa Ilaahiin iyo Ilaahii Muuse wuuna halmaamay.
Ayah 20:89 الأية
miyeyna arkay inuusan u soo Celinayn Hadal una hananayn dhib iyo Nacfi (midna).
Ayah 20:90 الأية
wuxuunau yidhi Haaruun mar hore qoomkayow waa uun laydinku fidmeeyey, Eebihiinna waa Raxmaan ee i raaca, adeecana amarkayga.
Ayah 20:91 الأية
waxay dhaheen kama tagayno korkiisa inaan ku nagaanno intuu nooga soo noqon muuse.
Ayah 20:92 الأية
wuxuu yidhi (muuse) Haaruunow maxaa kuu diiday markaad aragtay inay dhumeen.
Ayah 20:93 الأية
inaadan raacin ma waxaad caasiday Amarkeygii.
Ayah 20:94 الأية
wuxuu yidhi (Haaruun) ina hooyow hayqabanin Gadhka iyo madaxa, anigu waxaan ka cabsaday inaad dhahdo waxaad kala gaysay Banii israa'iil dhexdooda oodan maqlin hadalkayga.
Ayah 20:95 الأية
wuxuu yidhi (muuse) xaalkaagu muxuu yahay Saamiriyow.
Ayah 20:96 الأية
wuxuuna yidhi waxaan arkay waxayna arkin, waxaana qaatay wax ka mid ah raad rasuul (malaga) waana tuuray saasayna ii qurxisay naftaydu.
Ayah 20:97 الأية
wuxuu yidhi (Muuse) tag, waxaa kuu sugnaaday nolosha inaad dhahdo taabasho ma jirto, waxaana kuu sugnaaday waqti aadan baajinayn, day ilaahaagii aad ahayd mid ku kor nagi (caabudi) waanu gubi markaas waxaana ku firdhin mowjadda (badda) firdhin.
Ayah 20:98 الأية
Eebihiin waa uun Ilaahiinna ah kaan Eebe jirin isaga mooyee, wuuna u waasac noqday wax kasta ogaansho.
Ayah 20:99 الأية
saasaan kuugu qisoon (sheegi) warkii hor maray, waxaana kaa siinay agtanada quraan.
Ayah 20:100 الأية
ciddii ka jeedsata xaggiisa waxay xambaari maalinta qiyaame culays (dambi).
Ayah 20:101 الأية
iyagoo ku waari (ciqaabta) dhexdeeda waxaana u xumaaday iyaga maalinta qiyaame rar.
Ayah 20:102 الأية
waa maalinta la afuufi suurka, oon soona kulmineyno dambiilayaasha maalintaas iyagoo indho cawlan.
Ayah 20:103 الأية
wayna is warsan (xansan) dhexdooda maydaan ku nagaanin (adduunyada) Toban mooyee (maahmood)
Ayah 20:104 الأية
anagaa og waxay dhihi, markuu dhihi kooda ugu jid leh maydaan nagaanin maalin mooyee.
Ayah 20:105 الأية
waxay ku warsan Buuraha waxaad dhahdaa waxaa burburin Eebahay burburin.
Ayah 20:106 الأية
wuxuuna ka yeeli meel siman oo ebar ah.
Ayah 20:107 الأية
ku arki maysid qallooc iyo taag midna.
Ayah 20:108 الأية
maalintaas waxay raaci dhawaaqaha, kamana leexdaan waxayna u xasishay Cododku Eebaha Raxmaana mana maqashid shanqadh mooyee.
Ayah 20:109 الأية
maalintaas ma anfacdo shafeeco cid Eebaha Raxmaana idmo oo ka raalli noqday hadalkiisa mooyee.
Ayah 20:110 الأية
Wuxuu ogyahay Eebe waxa hortaada ah iyo waxa ka dambeeya mana ku koobayaan Eebe ogaansho.
Ayah 20:111 الأية
waxay u khuduucday Wajiyadu Eebaha nool ee wax maamula, waxaana khasaaray ruuxii xambaara dulmi.
Ayah 20:112 الأية
ruuxii fala wanaag isagoo rumeeyey kama Cabsado dulmi iyo nusqaamin midna.
Ayah 20:113 الأية
saasaanu kugu soo dejinnay Quraan Carabi ah uguna caddaynay ((celcelinay) dhexdiisa Gooddi inay dhawrsadaan darteed ama u timaado xusuus (waano).
Ayah 20:114 الأية
waxaa sarreeya Eebaha xaakimka xaqa ah, hana ku degdein quraanka ka hor dhamayn waxyigiisa xaggaaga, waxaadna dhahdaa Eebow ii kordhi Cilmi.
Ayah 20:115 الأية
dhab ahaan yaan ula Ballantannay Aadan mar hore wuuna halmaamay kama aanaan helin niyo Adag.
Ayah 20:116 الأية
xusuuso markaan ku nidhi Malaa'igta u Sujuuda Aadam wayna Sujuudeen Ibliis mooyee oo diiday.
Ayah 20:117 الأية
waxaana nidhi Aadamow kani (Ibliis) waa Colkaaga iyo colka Haweeneydaada ee yuusan idinka bixinin janada ood dhibbooto.
Ayah 20:118 الأية
waxaa kuu sugnaaday inaadan ku gaajoon dhexdeeda kuna arradin.
Ayah 20:119 الأية
waxaana kuugu sugnaaday inaadan ku oomin dhexdeeda kuna Qorroxoobin.
Ayah 20:120 الأية
waxaase waswaasiyey shaydaan wuxuuna yidhi Aadamow ma ku tusiyaa Geedda waaridda iyo xukun aan gaboobayn.
Ayah 20:121 الأية
wayna cuneen xaggeeda waxaana u muuqday Cawradoodii, waxayna noqdeen kuwa isku dhejiya korkooda caleenta jannadam wuu caasiyey Aadan Eebihiis wuuna leexday.
Ayah 20:122 الأية
waxaase doortay Eebihiis wuuna ka Toobadaqbalay oo hanuuniyey.
Ayah 20:123 الأية
wuxuu yidhi (Eebe) ka hoobta Jannada dhammaantiin qaarkiin qaar colbuu u yahaye, hadduu xaggayga idiinka yimaaddo hanuun ruuxii raaca hanuunkeyga ma dhumo (adduunka) mana xumaado (aakhiro).
Ayah 20:124 الأية
ruuxisa ka jeedsada xuskeyga (Quraanka) waxaa u sugnaaday nolol cidhiidhi ah, waxaana soo kulminaynaa maalinta qiyaame isagoo arag La'.
Ayah 20:125 الأية
wuxuuna dhihi Eebow maxaad ii soo kulmisay (keentay) anoo arag la' oona ahaa arke (adduunkii).
Ayah 20:126 الأية
wuxuu yidhaa (Eebe) waa saas waxaa kuu timid aayadahanaga waadna halmaantay saasaana maanta lagaaga tagi (sida halmaan).
Ayah 20:127 الأية
saasaan ku abaal marinaa ciddii xadgudubta oon rumayn aayaadka Eebihiis cadaabka aakhiraana daran oo hadhid badan.
Ayah 20:128 الأية
miyuuna u caddayn Gaalada intaan halaagnay hortood quruumo iyagoo ku socda guryahooda, taasna calaamaa ugu sugan kuwa caqliga leh.
Ayah 20:129 الأية
haddayna jirin kalimad u hor martay Eebahaa iyo muddo maga caaban wuxuu ahaan lahaa cadaabku mid ku soo deg dega.
Ayah 20:130 الأية
ee ku samir waxay sheegi kuna tasbiixso adoo mahadda Eebahaa ku dheehan ka hor qorrax soo bax iyo ka hor dhicidda, saacadaha habeenkiina tasbiixso (Tuko) iyo darfaha maalinta inaad raalli noqoto.
Ayah 20:131 الأية
hawtaagin indhahaaga waxaan ugu raaxaynay nooc ka mid ah oo quraxda nolashaa adduun si aan ugu fidnayno, rizqiga Eebahaa yaase khayrroon oo hadhid badan.
Ayah 20:132 الأية
far ehelkaaga salaadda kuna samir korkeeda ku warsanmayno rizqiye annagaa ku arzuqi cidhibta (fiicana) waxaa iska leh dhawrsashada.
Ayah 20:133 الأية
waxay dheheen gaaladii muu noola yimaaddo aayad xagga Eebihiis ka timid, miyuuna u imaanin Maraggii wixii ku sugnaa Kutubihii hore.
Ayah 20:134 الأية
haddaan ku halaagno Cadaab Rasuulka (iyo Quraanka) ka hor waxay dhihilahaayeen Eebahannow maxaad noogu diri wayday rasuul oon raacno aayaadkaaga ka hor dullowganaga iyo khasaarahanaga.
Ayah 20:135 الأية
waxaad dhahdaa (Nabiyow) dhammaan way sugi ee suga, waxaad ogaan doontaan cidda jidka toosan iyo cidda hanuunsane.